Yini zangena kuma? Axe ngabantu basendulo - yini lokhu?
Lwasekuqaleni indoda cishe abangakwazi ukuzilwela endulo, izingozi eziningi walala ukulinda. Waphoqwa ukuba azivikele ekuhlaseleni izilwane zasendle, ukunikeza ngokwabo nge nokokwembatha kusukela sezulu. With ukuthuthukiswa ukucabanga ifikile ukuqonda ukuthi idinga amathuluzi kanye ukuzivikela. Ngakho-ke sidalwe ngowokuqala ngembazo, nemikhonto, imimese, ishq. Yini zangena kuma, ubuza? Lesi sihloko zizozama ukuphendula lo mbuzo.
Yini nengulube, abavubukuli baye bathola le uyathola eyaqala kwesikhathi Acheulean (engaba iminyaka eyizigidi eziyi-1.6 edlule). By the way, la mathuluzi bakhona bazi ezingaphezu kuka ababengaphambi zabo. Esikhathini ngaphambili (shelsky) amathuluzi babe ingelashwa itshe shapeless futhi okukhulu kokuba imiphetho ebukhali. Kulesi sigaba, ngokuqondile ukusebenzisa izigubhu zabo futhi ukuzisika izakhiwo. Kamuva, itshe wasebenzisa izindlela ezithile kanye namasu ukuze kuzuzwe ukuma ofiselekayo. Abavubukuli ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba ishq indawo atholakele ngezibonakaliso ecacile Ukungenela komuntu izingalo. Futhi, izibhamu omkhulu ngamatshe amakhulu atholakele aqhephukile kolunye. Ngokusekelwe osekushiwo, omunye ungacabanga yini nengulube isikhathi shelskogo. Ngababuka, kuyacaca ukuthi umuntu, nakuba bokuhamba, kodwa uzama ukulwa namagciwane amagalelo abukhali izingcezwana itshe, kusale usiko. Paleanthropic inkathi Acheulean yena, nekhono nangokunembile hit yakhe, uhlukanisa ishq mncane.
Ngokuhamba kwesikhathi, isimo amathuluzi lasendulo ngcono. Le ndoda yabe ukufuna imigqa yokukhiqiza kanye izinto ezicijile. Acheulean isandla ngembazo - itshana, skived kusuka zombili ukwakha ithiphu elikhonza isibhamu okukhulu. Ingxenye ingelashwa itshe nge surface bushelelezi okuphambene ichopho, has a isibambo, etholakala entendeni ngoba eliyifa elula. Ngokungafani shelskih amazombe izindwani esadaleka e uhlevane abathathela ngembazo indoda lasendulo kwadingeka okweqanda, nomumo alimondi ngaphezulu kwesikhathi okwalandela.
Imbazo lokuqala Neanderthal senziwa ngamatshe, etholakala emifuleni nasolwandle emikhawulweni. Amathuluzi ngawo e endulo wawenziwa ngembazo - zamatshe ezimbili. Enye yawo kwakunguyise kusukela imishini yokusaha izingodo, futhi yakhonza ukushaqeka ingxenye, kwenye yensimbi esizayo. amatshe Scabbling waqala nohlangothi ewumngcingo, kwakheka ekupheleni abukhali. Igalelo wokuqala yakha ikhefu lapho ukhonza njengoba ekuqaleni umsebenzi okwalandela. Umuntu olandelayo, kusukela kude adalwe zigundiwe zilandelana ezincane izingcezu itshana, ekufezeni ukuma ofiselekayo. Ukuze ukumosha workpiece, wasebenzisa Bump. It lasetshenziswa workpiece kwaphezulu washaya into kanzima. Lokhu kwasiza silandele isiqondiso nomthelela futhi ulungise amandla. Lapho ifomu oyifunayo itholiwe, le Bump lalisetshenziswa njengesibhedlela ishizolo. Ngosizo izingqimba esingeziwe itshe isusiwe. Kulesi amasu ukushaqeka eyayihambisana ingcindezi. Nale ngembazo atholwe blade mncane eside. Lo msebenzi required ukuqapha kuqiniswa futhi amandla "angaphezu kwawabantu". By the way, ososayensi bathole ukuthi i-Neanderthal sasinamandla kasithupha ukwedlula umuntu okhona. Timphawu ingafaniswa amandla i-gorilla ezinkulu.
Nge nengulube indoda bakudala wenza futhi siphelelisa amathuluzi amasha, ezifana scrapers, futhi awls. La mathuluzi aye asiza ukuqoba paleanthropic isilwane isikhumba futhi ahlukaniselwe izingcezu inyama bephundlekile.
Indlela ukusebenzisa imbazo? Yini bekungenjongo izikhathi Neanderthal Paleolithic? Leli thuluzi sekungamakhulu indoda akuyona nje indlela zomsebenzi, kodwa futhi ithuluzi ukuvikelwa. Futhi esikhundleni amathuluzi eziningi zanamuhla, ngaphandle esingakwazi amaphuzu isipikili. Axe lula kakhulu ekuphileni kwabantu lasendulo. Ukusebenza le esingagwegwesi, ukuphela abukhali, Paleoanthropes ungase ugaye izitshalo, ezidliwayo, umhlaba okuxekethile, ekufuneni izimpande ezidliwayo, amantongomane olwembiza. Leli thuluzi jikelele, ukwenza imisebenzi ehlukahlukene. Siyabonga kuye, kwakunokwenzeka ukuthola umdlalo encane ukwenza izinto sokhuni namathuluzi. Ifaka ithiphu abukhali ukuze induku ende, kubo zihlubule, bahlanza wayokhuhla off amagxolo ezihlahla usike amagatsha ngiwunqamule.
Kususelwa ifomu ngembazo, nge isikhathi umuntu uye wadala amathuluzi anjenge kwesando ngembazo.
Ukuzamazama komhlaba e Tashkent ku 1966: isithombe, inani labafayo
Biography of Sultan Süleyman: impi nokuthula
"Brigades Red" futhi indlela yabo olunegazi
Usuku breaking nokuvinjelwa Leningrad
Scottish ikati pryamouhie: izici uhlamvu
Little black ingubo Koko Shanel embonweni yesimanje
Smartphone "Microsoft Lyumiya 640": ukubuyekezwa, ukubuyekezwa, Ukucaciswa
Kanjani bamba ithambo ihembe nge ezinemikhono emide kwesokudla?
Fibonacci amazinga e Forex Ukuhweba
Zhigarev Sergey Aleksandrovich: Biography, izimpumelelo amaqiniso athakazelisayo
Ukuya Astrakhan - iholide olwandle
Ingane kwezinyanga ezingu-9: ukuthuthukiswa kanye nokudla, usizo nokwelashwa. Lokho kufanele kube umntwana akwazi ngezinye izinyanga 9?
Putty amawindi. Ukwakha, ukususwa kanye sebethule